Sọpụrụ 8 Pro na 6X smartphones ga -emelite na gam akporo Oreo tupu ngwụcha afọ | Androidsis
Sọpụrụ 8 Pro na 6X smartphones ga-emelite gam akporo Oreo tupu njedebe nke afọ
N'oge na -adịbeghị anya, Honor ụlọ ọrụ ahụ nwere nzukọ ofufe na India iji kwurịta nkwalite ndị ọrụ ga -achọ ịhụ n'ọgbọ ọzọ nke ekwentị ụlọ ọrụ.
Ụlọ ọrụ ahụ ji ihe omume a kwuputa nke ahụ A ga -emelite smartphones 6 na Sọpụrụ 8 Pro na ụdị gam akporo Oreo kachasị ọhụrụ.
Ekwentị Sọpụrụ 8 Pro ga -enweta mmelite na gam akporo Oreo otu oge na Disemba, ebe Sọpụrụ 6X ga -enwetakwa ya ntakịrị tupu ngwụcha afọ a agbanyeghị, enwere ohere na mmelite a nwere ike gbuo oge na Jenụwarị 2018. N'aka nke ọzọ, a na -atụkwa anya mmelite Android Oreo Ọ bụghị na njedebe ndị a kama ha na -erutekwa smartphones ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ. Otu n'ime ha kwesịrị ịbụ nsọpụrụ 9 a ma ama, n'agbanyeghị na ekwenyebeghị nke a.
Ụdị sistemụ mkpanaka mkpanaka Google kachasị ọhụrụ ga -eweta ọtụtụ ihe ọhụụ na ngwaọrụ sọpụrụ, gụnyere njiri mara ya foto dị na foto (PiP), na a nwekwuo ike na ọkwa, n'etiti ndị ọzọ.
Ka ọ dị ugbu a, na mmemme ahụ na ndị ọrụ nke Sọpụrụ mere na India, ọ ga -aba uru ịdeba ụfọdụ n'ime nkwalite ndị fan tụrụ aro ya na nke ahụ, ikekwe, Sọpụrụ nwere ike ịgụnye n'ọdụ ụgbọ ala n'ọdịnihu. N'ime aro ndị ahụ, pịa okpukpu abụọ iji teta ọdụ ụgbọ ala site na ezumike zuru oke, nke a hụworị na ụfọdụ ekwentị, yana ịgba chaja ngwa ngwa, n'etiti ndị ọzọ.
Ọtụtụ Fans na -atụkwa aro mee ka oyi akwa nhazi EMUI dị mfe Ọ dị mma, ugbu a mmetụta nke gam akporo na -agbanwe nke ukwuu. N'oge a, anyị ga -eche maka mwepụta nke EMUI 6, nke nwere ike mee mpụta mbụ ya na ekwentị Huawei Mate 10 na Mate 10 Pro nke a ga -ewepụta na Ọktọba 16, ịhụ ma ọ bụrụ na Sọpụrụ na -ege ndị ọrụ ntị n'ezie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sọpụrụ 8 Pro na 6X smartphones ga-emelite gam akporo Oreo tupu njedebe nke afọ